National Power News:: महिलाहरुमा किन हुन्छ मुत्रनलीको संक्रमण ? National Power News:: महिलाहरुमा किन हुन्छ मुत्रनलीको संक्रमण ?
९माघ,काठमाण्डौ – हरेक महिलाले भोगेकै होलान्, पिसाबको संक्रमण । मासिक श्राव, गर्भावस्था जस्ता विभिन्न चरणबाट गुज्रनुपर्ने भएकाले महिलाहरुको योनीद्वारमा संक्रमणको भय बढी हुने गर्छ । यसलाई चिकित्सकको भाषामा युटीआई अर्थात युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन भनिन्छ । यो भनेको मुत्रनलीमा हुने संक्रमण हो । योनीद्वारको सरसफाईमा ख्याल नपुर्‍याउँदा, असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्दा यस्तो समस्या निम्तन सक्छ ।
- संवेदनशील स्थानमा चोट लागेमा
- दर्गन्धित शौचालयको प्रयोग
- धेरैबेरसम्म पिसाब रोकेमा
- गुप्ताङ्गको राम्रोसित सफाई नगरे
- पानीको कम सेवन
- रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएमा
-प्रशस्त मात्रामा पानीको सेवन गर्ने
प्रत्येक पटक पिसाब गरिसकेपछि योनीको राम्रोसित सफाई गर्नाले पनि यो समस्या विस्तारै कम हुँदै जान्छ । त्यतिमात्र हैन, यौनसम्पर्क पश्चात्त पनि महिलाहरुमा युटीआई हुने सम्भावना अधिक हुने भएकोले प्रत्येक पल्ट यौन सम्पर्क पछि आफ्ना गुप्ता घको राम्ररी सफाई गर्न त्यसलाई सुख्खा राख्न जरुरी छ । विशेषगरी, गुताङ्ग ओसिलो रहेमा त्यसमा जिवाणुका संक्रमण हुने खतरा बढी रहन्छ । साथै युटीआईको समस्या जसटिल भएमा यसले मृगौलामा संक्रमण गरी गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ ।